အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်း gotcha ရှိသနည်း
ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 52 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများအစီရင်ခံသည့်အာရုံကြောတွေ့ရှိချက် mirror အဖြစ်အားလုံးသည်စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 27 မကြာသေးမီက neuroscience-based စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
လတိုင်းနီးပါးလေ့လာမှုအသစ်အရအစားအသောက်စွဲခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်တူသော ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်။ အစားအစာနှင့်လိင်ကို“ သဘာဝအားဖြည့်ဆေးများ” ဟုလူသိများသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်ကြပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကသူတို့အတွက်လင်းလက်စေသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်တွေးတောစရာမလိုဘဲပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။
သို့သော်“ အစားအစာသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်တူသောကြောင့်အဝလွန်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်” ဟူသောအယူအဆသည်ရှုပ်ထွေးနေသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးရိုးဗီဇဘိုးဘွားများသည်အလွန်စားခဲ့ကြပြီးလိင်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ သို့တိုင်အန္တရာယ်ရှိသောချိတ်ဆက်မှုခံရခြင်းသည်စွန့်စားရမှုများစွာရှိပုံမရပေ။ မလုပ်ခဲ့ဘူး သူတို့၏ ဦး နှောက်ကအစားအစာနှင့်လိင်ကိစ္စကိုထွန်းလင်းစေနိုင် ဟုတ်ပါတယ်။ ခြားနားချက်ကသူတို့ဝိုင်းရံမထားသောကြောင့်ဖြစ်သည် အစားအစာနှင့်လိင်၏ superstimulating, ဒြပ်ဗားရှင်း။ ကျနော်တို့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တစ်ဦးအတော်လေးမကြာသေးမီအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အဲဒီအကြောင်းစဉ်းစားပါ။ ဘယ်နှစ်ယောက်သင်၏ဘိုးဘေး၏အဆုံးမဲ့အမျိုးမျိုးအတွက်ဈေးပေါပေါရရှိနိုင်ပါအဆင်သင့်-to-ကိုစားကြ၏အရသာရှိတဲ့ munchies ရန်လွယ်ကူ access ကို, ရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်ဂရုတစိုက်ပိုပြီးပြန်လာမယ့်သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အဆီ, သကြားနဲ့ဆားနှင့်အတူဧည်? ဘယ်နှစ်ယောက်အလိုဆန္ဒ (မျိုးဗီဇအခွင့်အလမ်းများအတိုင်းဦးနှောက်၏စရိုက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ရိပ်မိ) ကတညျး, အစာစားချင်စိတ်အလံအခါ, တစ်ဦးနှင့်အတူ writhing, ကိုမှန်ကန်ဝတ္ထုအိမ်ထောင်ဖက် featuring, သူတို့က Hyper-လှုံ့ဆော်ဖို့ခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုများချိုးစီးဖို့ကိုနှိပ်ပါနိုင်သည့်အပေါ်ကွန်ပျူတာများခဲ့ အစဉ်အဆက် kinkier ဗီဒီယိုများ cornucopia?
အပြာစာပေ၊ ဒါဟာ Synaptic လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုပါ။ သငျသညျနံနက်ယံ၌ထ, တစ် ဦး thumbnail စာမျက်နှာဖွင့်လှစ်, ထိုသို့ Pandora ရဲ့ပုံရိပ်တွေ box ကိုစေပါတယ်။ အိပ်ရာမထမီယောနိ ၃၀၀ ကိုတွေ့သည့်နေ့များရှိနိုင်သည်။ယောဟနျသ Mayer, ဂီတပညာရှင်
ဒီနေ့သွေးဆောင်မှုတွေကိုအကြီးအကျယ်နှိုးဆွပေးတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုပြန်ပေးဆွဲနိုင်တယ်။ ဂျွန်မေယာကကြည့်ရှု့မည့်နည်းလမ်းမရှိ တူညီတဲ့ လိင်အင်္ဂါ 300 ကြိမ်လျှင်မြင့်တက်လာမှီ, ပြောသူသာ porn မဂ္ဂဇင်း, ဒါမှမဟုတ်ပင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ constant အသစ်အဆန်း-ပေါင်း-erotica riveting ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဦးနှောက်က key ကိုအာရုံကြောဆဲလ် receptors (မူးရူးကသူ့ကိုမောင်းထုတ်ရန်) ပိတ်ပစ်သကဲ့သို့တစ်ဦးချင်းစီအသစ်ကပုံရိပ်ကိုပိုမို dopamine ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူကပင် 3-D ကိုလှုံ့ဆော်မှုအထက်ကသူ့ pussy မြင်ကွင်းကျယ်တန်ဖိုးထားလေးမြတ်သို့လှည့်ဖြားသည်။
PLAYBOY: ခင်ဗျားဟာရည်းစားဟောင်းတစ်ယောက်နဲ့အသစ်တွေ့တဲ့သူနဲ့တွေ့ဆုံရတာထက်ပိုချင်ပါတယ်။ May: အင်း .... အင်တာနက်ကနေညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကကျွန်မရဲ့မျိုးဆက်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုလုံးလုံးပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ သင်ရိုက်ချက်များစွာအပေါ်အခြေခံပြီးအော်ဂဇင်ကိုမည်သို့အဆက်မပြတ်ဖန်တီးနိုင်မည်နည်း။ သင်ရှာဖွေနေသည် ... သင်ကျိန်ဆိုသည်မှာ ၁၀၀ အနက်သင်ပြီးသွားလိမ့်မည်၊ သို့သော်သင်မပြီးနိုင်သေးပါ။ လွန်ခဲ့သောစက္ကန့်နှစ်ဆယ်ကဓာတ်ပုံသည်သင်မြင်ဖူးသမျှတွင်အပူဆုံးဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်ခဲ့သော်လည်းပြန်လည်ပစ်ချပြီးရိုက်ချက်ကို ဆက်၍ အလုပ်အတွက်နောက်ကျကျန်နေခဲ့သည်။ ဒါကတစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းရဲ့စိတ်ပညာကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်စေမှာလဲ။ ရတယ်
ဤသည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တလျှောက်လုံးယေဘုယျအားဖြင့်ရှိသည်သောဘယ်လိုအစားအစာနှင့်လိင်ဖြစ်ပါသည် လှူဒါန်းခဲ့ ကျွန်ုပ်တို့၏သုခချမ်းသာနှင့်သဘာဝကျစွာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့သောစွဲလမ်းစေသည့်စွဲလမ်းစေသောအရာများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၀ င်ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးအဖိုးတန်သော၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အန္တရာယ်များသောသွေးဆောင်မှုများကိုခံကြရသည်။ သူတို့ထံမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံကိုခိုးယူနိုင်မသာ စစ်မှန်သောလူတို့နှင့်အတူပွော့ဆက်သွယ်မှု (နှင့်အာဟာရအစားအစာ), သူတို့ကအမှန်တကယ်လုပ်နိုင် ကျွန်တော်တို့ကိုချိတ်.
စွဲလမ်းမှုသုတေသနအများစုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကိုအဓိကထားသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှလူနည်းစုသာ (အသစ်အဆန်း-ရှာဖွေနေသူ"နှင့်"ထကြွလွယ်သောဦး နှောက်၏အကျိုးကျေးဇူးများသောနေရာများတွင်မတူညီသောဒေသများတွင် dopamine receptors နည်းပါးသောကြောင့်၊ (Dopamine သည်“ Gotta get it” neurochemical နှင့် အကျိုးကို circuitry အားလုံးစားချင်နဲ့လှုံ့ဆော်မှုမောင်းသောဦးနှောက်ကိုလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ )
ဒါကြောင့်ငါတို့၏ကျန်စွဲလမ်းမှုမှဘေးကင်းလုံခြုံပါသလား ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ဟုတ်ကဲ့။ သဘာဝအားဖြည့်အင်အားဖြည့်တင်းခြင်းကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင်လူတိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းအဖြေမှာမဖြစ်နိုင်ချေ။ အလွန်အကျွံလှုံ့ဆော်ပေးသောအစားအစာနှင့်လိင်မူကွဲများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစွဲလမ်းမှုအတွက်မခံနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုစွဲမက်စေနိုင်သောအကြောင်းရင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ် အစားအစာနှင့်လိင်ဆီသို့ကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းထုတ်ရန်ပြောင်းလဲမဟုတျဘဲမူးယစ်ဆေးဝါးများ။
အစားအစာကိုယူပါ။ Hyper-လှုံ့ဆော်အစားအစာများအပေါ် အကယ်. မူးရူး (ပြော, ဆီဥနှင့်သန့်စင်ပြီးသကြားအာရုံစိုက်) ကပစ္စည်းဥစ္စာချိုးဖောက်မြင်ကြဦးနှောက်ကိုအပြောင်းအလဲဆင်တူကြောင်းအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤသည်မှာလည်းကြွက်များတွင်ဖြစ်ပျက်လျက်နှင့်မရုံအသစ်အဆန်း-ရှာကြံ, ထကြွလွယ်သောလူနည်းစုပါ။ အားလုံးနီးပါး ဒိန် Dongs နှင့်နှင်းခဲကဲ့သို့သောအရသာရှိသောအစားအစာများကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာအသုံးပြုခွင့်ပေးသောတိရစ္ဆာန်များသည်အရက်သောက်ခြင်းကိုမရပ်တန့်နိုင်ဘဲအဝလွန်လာခဲ့သည်။
ချက်ချင်းနီးပါး, dopamine receptors မူးရူးဖို့ကြွက်မောင်းသောသူတို့၏ဦးနှောက်အတွက်ကျဆင်းသွား, သူတို့သည်နောက်ပိုင်းမှာပုံမှန် Chow ကနေလျော့နည်းဆွတွေ့ကြုံခံစားမယ်လို့ရရှိနိုင်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောအခြားအပြောင်းအလဲများ, numbed အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုဆိုးလာတယျ။ နှစ်ပတ် သိပ္ပံပညာရှင်များက၎င်းတို့အားကြွက်များကိုကြွက်များသို့ပြန်ပို့ပြီးနောက်တွင်ကြွက်များ၏ ဦး နှောက်သည်မပျောက်သေးပါ။ တကယ်တော့သာမန်စားစရာတစ်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါသူတို့ဟာအစာစားမယ့်အစားအစာငတ်တာကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်။ (အပြည့်အဝလေ့လာမှု)
နို့တိုက်သတ္တဝါများကြောင်းလုပ်နိုင်မယ့် built-in ယန္တရားရှိသည်ဖို့အတှကျဒါဟာသဘာဝကျပါတယ် မွတ်မပြေ၏ခံစားချက်များကို override။ အပင်များမှည့်သောအခါကယ်လိုရီများကိုသိုလှောင်ထားခြင်း၊ hibernation မတိုင်မီ gorging၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုမပေါ်ပေါက်မှီသေဆုံးခြင်းကိုမျိုချခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
သို့သော်လူသားများအပါအ ၀ င်နို့တိုက်သတ္တဝါများသည်သဘာဝတွင်မတည်ရှိသည့်အစားအစာများဖြစ်သောကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုမရှိသောကတ်နှင့်သကြားဓာတ်များသို့ပြောင်းလဲခြင်း မှလွဲ၍ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းမှထွက်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။
မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များအတွင်းအမေရိကန်အားလုံးတွင်အဝလွန်မှုတိုးပွားလာသော်လည်း ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ အိန္ဒိယ၏သံသယများမှာမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ [starchy] ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အမြန်အစားအစာအစားအစာများသည်အိန္ဒိယလူမျိုးများသည်မကြာသေးမီမျိုးဆက်များအထိစားသုံးခဲ့သည့်အရာနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ကောင်းစွာအနွယ်အစေခံရန်။
သို့သော်အမေရိကန်တိုင်းရင်းသားများမှာမူများပြားလာခြင်းမဟုတ်ပါ။ အများဆုံးသုံးပုံနှစ်ပုံနီးပါး အနောက်တိုင်းသားအဝလွန်နေကြသည်, အမေရိကန်နှင့် 30 + ရာခိုင်နှုန်းကို obese ။ ကြွက်များနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ခါးဂရုစိုက်ကြောင့်ဤသည်အထူးသဖြင့်ပင်ပြင်းထန်သွေးဆောင်မှု၏မျက်နှာကိုအတွက်စစ်ဆေးမှုများအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့စောင့်ရှောက်သောပြောနေပါတယ်။
ဦး နှောက်၏ဒေသများသည်အစားအစာအလွန်အကျွံစားခြင်းအပေါ်တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့လိင်အယူသီးမှုတွေကယနေ့အမှိုက်ပုံးတွေလိုမူးယစ်ဆေးဝါးလိုမျိုးပြောင်းလဲမှုကို ဦး နှောက်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုပြောင်းလဲစေသလား။ ၎င်းတို့သည်သဘာဝ၌တွေ့ရှိရသောလိင်ဆိုင်ရာအဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။
အပ်ဒိတ်: ဤဆောင်းပါးတွင်ရေးသားခဲ့ချိန် မှစ. , Porn အသုံးပြုသူများအပေါ်ဦးနှောက်စကင်လေ့လာရေး, sensensitation နှင့်တိုကျရိုကျ cortex အတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူ, desensitization, အသုံးပြုမှုမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုလျော့နည်းနှိုးဆွ၏သက်သေအထောက်အထားများတွေ့ပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်းမိုးသည်းထန်စွာရွာသူရွာသားများညည်းညူသောရောဂါလက္ခဏာများသည်ကြွက်များတွင် ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်သည့်စူပါကောင်းကျိုးများကိုအကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ယုတ္တိနည်းကျစွာရှင်းပြနိုင်သည်။ (စကားမစပ်, ကြွက်နှင့်လူသားဝေးလံသောဆွေမျိုးသားချင်းများဖြစ်ကြပြီးအစာစားချင်စိတ်နှင့်စွဲများအတွက်တူညီသောစရိုက် ဦး နှောက်ယန္တရားများကိုမျှဝေပါ။ )
ရုံ porn အပေါ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အစားအစာ, ညစ်ညမ်းသည်အသုံးပြုသူများမကြာခဏမူးရူးပေါ်ကြွက်မူးရူးအဖြစ်။ အတော်များများသည်အသုံးပြုသူများမတူဘဲသူတို့ကြည့်ရှုရပ်တန့်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်သတင်းပို့ Sooty အဆိုပါ guinea ဝက်သူသည်အမျိုးသမီးများအပြည့်ပါသောလှောင်အိမ်ထဲသို့ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်သောအခါ“ အဆင်ပြေနေစဉ်၎င်းကိုရရှိခဲ့သည်” ။
အသုံးပြုသူများသည်ကိုလည်းမကြာခဏဖြစ်နိုင်ထံမှအပျြောအပါး (ရန် numbed sensitivity ကိုသတိထားမိ အောက်ပိုင်း dopamine receptors), အရာလိင်စိတ်, ထိုဖြစ်ပါသည်, Self-ဆေးအညစ်သို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်ပိုမိုမကြာခဏဆွ (အသေးစိတ် dopamine) များအတွက်လိုအပ်တိုးတက်မြင့်မားလာအဖြစ်ဖွင့်ပြသည်။ မကြာခဏသူတို့ဖွံ့ဖြိုး, ထှတျအထိပျအောင်မြင်ရန်ပိုမိုလွန်ကဲပစ္စည်းလိုအပ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆန္ဒအလျောက်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်၎င်းတို့အား (ထပ်ဖြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်သီးသန့်ဖြစ်ခြင်းသို့ပြန်သွားခြင်း) ကိုကျေနပ်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိပါ။
မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများသည်ကိုလည်းတစ်ခါတစ်ရံစိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive အပြုအမူတွေ, စိတ်ကျရောဂါ, လူမှုရေး၏အတွေးမှာပြင်းထန်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာကိုသတင်းပို့ပါ။ porn အစီရင်ခံစာကြည့်ရှုရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားသူကိုနှင့်သုံးစွဲသူများ ရှိနေဆဲဟုဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေစိတ်ဖိစီးခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိတ်ပျက်ဖွယ်တွေးဆခြင်း၊ အစာအိမ်နာကျင်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသောအိပ်မက်များ၊ တုပ်ကွေးကဲ့သို့သောလက္ခဏာများနှင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုလည်ပင်းညှစ်သတ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဤရောဂါလက္ခဏာများကသူတို့၏ ဦး နှောက်သည် ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အမှန်ပင်ရုန်းကန်နေရသည်ဟုဖော်ပြသည် စွဲဖို့ဘုံ။ porn ပြန်လည်နာလန်ထူက်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးက်ဘ်ကျော်တက်လာကြသည်။
ဤတွင်သော့ချက်အချက်မှာလူအများစုသည်ပစ္စည်းများကိုအလွဲသုံးစားမပြုကြသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုမစမ်းကြည့်ခြင်း၊ များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်မသုံးခြင်း၊ ဒါပေမယ့် သကြားလုံးတွေ၊ အထူးသဖြင့်သူ့ ဦး နှောက်၏စိတ်ကျေနပ်မှုတုံ့ပြန်မှုသည်အလွန်အကျွံနှိုးဆွခြင်းမှထုံထိုင်းလျှင်အထူးသဖြင့်သွေးဆောင်မှုဖြစ်စေသောအမြင်အာရုံကိုဖြစ်စေမကြိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်ထက် ပို၍ ထိခိုက်လွယ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများ (နှင့်ကျွန်ုပ်တို့) သည်မတွန်းလှန်နိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲလာသည့်အရာတစ်ခု၏အထူးတန်ဖိုးရှိသောဗားရှင်းအဖြစ်မှတ်ပုံတင်သည်။
အမျိုးပေါင်း (အသစ်အဆန်း) ၏စာရေးလာနှင့်
ကျွန်တော်ဦးနှောက်ကိုအပြောင်းအလဲမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေစေပါတယ်သတိမထားမိဘဲ binge ။
ငါတို့မြင်ခဲ့သည့်အတိုင်းအမှိုက်ပုံးများသည်ဤပုံစံနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ထိုနည်းတူပင် အခမဲ့အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း။ သို့တိုင်ညစ်ညမ်းမှုသည်အန္တရာယ်များသောအရာများဖြစ်သည်။ အစားအစာသည်စားသုံးမှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။ အစာအိမ်စွမ်းရည်နှင့်သဘာဝမကျေနပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်စုံတစ်ခုကို ထပ်၍ မတွေ့ကြုံနိုင်သည့်အချိန်တွင်ကန်သည်။ ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာရှိပါတယ် အဘယ်သူမျှမ အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ရေချိုးခန်းနားချိန်များလိုအပ်ခြင်း မှလွဲ၍ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသုံးစွဲမှုအပေါ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ။ ဦး နှောက်၏အစာစားချင်စိတ်ယန္တရား၏ supranormal အာရုံကြောဓာတုနှိုးဆွခြင်း၏အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သောစိတ်ကိုမထိမခိုက်နိုင်ခြင်းနှင့်စိတ်မသက်မသာဖြစ်ခြင်း၊ အူမကြီးခြင်းများ၊ တစ်ခုချင်းစီကဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုကိုနှိပ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ချိုးဖောက်အသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြင့် ဦး နှောက်ထဲသို့ dopamine ပိုမိုထုတ်လွှတ်သည်။
ပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှုသည်ဒိန်ခဲထက် ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအာရုံခံဓာတုပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည်၊ ယင်းက ပို၍ အားဖြည့်ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဦး နှောက်သည်ဆက်စပ်အချက်အလက်အားလုံးကိုအတူတကွချိတ်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြင့်အနာဂတ်တွင်ကြုံတွေ့ရမည့်အတွေ့အကြုံများကိုအလိုအလျောက်ပိုမိုဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံအသုံးပြုသူအားစိတ်ဓာတ်ကျစေသည် ဖော်ရွေအပြန်အလှန်လိုက်ရှာ ဦး နှောက်ကိုသဘာဝကျကျထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့အခြားသူတွေနဲ့ပါ။ တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများကိုအလွန်အကျွံနှိုးဆွခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည့်အချက်များလည်းမရှိပါ။ မနာလိုသောအိမ်ထောင်ဖက်များ၊ ပညာရှိအကြီးအကဲများသို့မဟုတ်လူမှုရေးမညီညွတ်မှုများနှင့်မကြာခဏသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံဖက်များမရှိပါ။ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပုဂ္ဂလိကနှင့် virtual အတွက်အန္တရာယ်ကင်းဝေးပုံရသည်။
ကံဆိုးချင်တော့ယနေ့လူအများစုသတိမထားမိကြသည့်အပြင်ဒီနေ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်နွှယ်သောပြောင်းလဲမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့လည်းသတိပြုမိသည်။ ၎င်းက“ အော်ဂဇင်ပြုမှုမြှင့်တင်သည့်အပြုအမူများသည်သဘာဝအားဖြင့်အလွန်ကျန်းမာပြီးယနေ့ခေတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူပါစတီကျူးများအားအကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအန္တရာယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ငြင်းပယ်ရမည်။ ”
ဒီအသံကတွေးနေသလား။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအစားအစာနှင့်လိင်ဆီသို့တွန်းအားပေးရန်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာပါကကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုအလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်ပေးသည့်ဗားရှင်းများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုနစ်မြှုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့နည်းနည်း ပို၍ သတိကြီးစွာထားသင့်သည်မဟုတ်လော။ ယခုပင်လျှင်၊ “ အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုအတွက်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အင်တာနက်အသွားအလာအားလုံး၏ ၁၂% ခန့်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဖြစ်ပြီးလူငယ်လူ ဦး ရေ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း (လူငယ်အမျိုးသမီး ဦး ရေ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်) သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုကြသောကြောင့်၎င်းသည်လူအများအပြားကိုဘာသာပြန်ဆိုသည်။ ပါမောက္ခစတီဗင် C. Hayes.
porn ထွက် Cut, ဒါပေမယ့်ယခုအဆက်မပြတ် OKcupid နှင့် Facebook ဓါတ်ပုံတွေကိုရှာဖွေနေ
SFW အားလုံးပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါကပုံစံတူတူပဲလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိတယ်။ ငါ OKcupid ပရိုဖိုင်းကိုဖွင့်လှစ် tabs 30 ရှိလိမ့်မယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်နှိုးဆော်ခြင်းမခံရသကဲ့သို့၊ ကိုယ့်အသစ်အဆန်း, အ Chase မှစွဲတယ်။ ဒါကကျွန်တော်ထင်ထားတာထက်ပိုခက်တယ်
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာအဲဒီလိုမထင်ပါဘူး၊ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာဒါကိုတကယ်မစဉ်းစားဘဲသွားနိုင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်အဆင်မပြေပါ။ သို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့်ပြproblemsနာများမရှိပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိုတကယ်ထိမိစေသည့်အချက်မှာကျွန်ုပ်၏ libido နှင့် ED ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါသည်။ ငါအများဆုံးကျိန်းသေ "porn" မှကိုယ့်ကြောင့် defining ပြproblemsနာများရှိသည်၏အချက်ဖို့ desensitized ဖြစ်၏။ porn ဆိုတာဘာလဲ ငါကသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုသိပေမဲ့၊ အဘယ်သူမျှမခန္ဓာကိုယ် 1993 ကတည်းကဓါတ်ပုံတွေကိုမှ fapped သိရသည်။ ငါသိပ်အီးမေးလ်လိုပဲ reddit နှင့် Tumblr အပေါ်အနုပညာသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ဝတ်လစ်စလစ်, thru scroll ။
ဒါကြောင့်ကိုယ့်မေးခွန်းတစ်ခုကိုဝတ်လစ်စလစ် / လိင်တို့ရှေ့မှာဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ desensitization သင့်ရဲ့လိင်စိတ်ကိုသတ်ပြုမူဘူးသည်ကိုခန့်မှန်း? သင့်ရဲ့ရမ္မက် sate ရန်နည်းလမ်းများသင်အစစ်အမှန်အရာအတွက်အတိုးကိုဆုံးရှုံးစေသည်အဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာသူတို့အမှုအရာတို့ကို အသုံးပြု. သနည်း? တစ်ခုခုကိုလမ်းငါမ fap တစ်လမှာရိုက်ချက်ယူ။ မည်သို့သွားပုံကိုကြည့်ရှုပါ ..
သင်၏ pornainbanced.com သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲမက်ခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်သောက်ခြင်းထက်ပိုမိုဆိုးဝါးသည်
ဤကိစ္စကိုအထက်လွှတ်တော်ကြားနာပွဲများနှင့်ခရစ်ယာန်ဖိုရမ်များတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးပြီးများသောအားဖြင့်အကြောက်အလန့်တုန်ဖြစ်နေတတ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်ထက်အဘယ်ကြောင့်ပိုမိုဆိုးရွားရသည့်အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ကြားခဲ့ရသောအဓိကအငြင်းပွားမှုမှာသင်၏ခန္ဓာကိုယ်မှထုတ်ယူနိုင်သည့်အရာများနှင့်မတူဘဲ၊ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်ပိုကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်“ သင့်ကိုအမှတ်ရစရာမကောင်းစေ” ထက်ပိုဆိုးသည်ဟုယုံကြည်သည်။ ဒီတော့ဒီမှာထပ်မထည့်ဘဲအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကမူးယစ်ဆေးဝါးတွေ၊
၁ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူသည်မရပ်တန့်နိုင်သောတပ်မက်မှုဖြင့်ထိမှန်သောအခါအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူမလုပ်ရန်မတတ်နိုင်သောအရာအတွက်သူလုပ်ရမည့်အရာများစွာရှိသည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူသည်သူ၏နေအိမ်မှအမှန်တကယ်ထွက်ခွာပြီးသူ၏မူးယစ်ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်အရက်သေစာကိုရောင်းသူထံမှဝယ်ယူရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူသည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်လူမြင်ကွင်းတွင်ကြည့်နေသည်ကိုဆိုလိုသည်။
အပြာနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများသည်အင်တာနက်အပြာစွဲစွဲသူနှင့်မတွေ့ရသောလူထုနှင့်ထိတွေ့မှုအန္တရာယ်ရှိသည်။ ငါအင်တာနက် porn စွဲလမ်းကပြောသည်သတိပြုပါ။ VHS, DVD၊ မဂ္ဂဇင်းများမှာရုပ်ပုံတင်ခြင်းဟာယနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်မတူပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်အများပြည်သူသို့ ၀ င်ပြီးဝယ်ယူရန်လိုနေသေးသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူသည်သူ၏အလေ့အထကိုစတင်ရန်အသင့်ဖြစ်ပြီဆိုလျှင်အရှက်ရသည့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကိုအများပြည်သူနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အကာအကွယ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြင့်ညစ်ညမ်းကို ၀ ယ်လျှင်ပင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်လူအများနှင့်ထိတွေ့မှုအန္တရာယ်ရှိသည်။
၂ ။ ၀ ယ်ခြင်းအကြောင်းပြောခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အရက်နှင့်ပတ်သက်လျှင်သင်၏အလေ့အထသည်သင်၏ ၀ င်ငွေကောင်းသည်ထက်ဆိုးသည်။ ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသူများသည်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံထိုးနှက်ရန်အတွက်မိမိတို့၏မိသားစုများကိုကျွန်စနစ်သို့ရောင်းချရန်လူသိများကြသည်။ သို့သော်အင်တာနက်သည် ၁၀၀% အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာလခပေးသောဆိုဒ်အချို့ရှိနေသည်။ သေချာသည်မှာပြွန်ဆိုဒ်များနှင့် torrent များအားလုံးနှင့်အတူအရူးတစ်ယောက်သာဒီနေ့ခေတ်တွင်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုရန်ပိုက်ဆံပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အချို့သည်မူးယစ်ဆေးစွဲနေသူထက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကျင့်များကိုမိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်ဟုခံစားရကောင်းခံစားရနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အစိုးရကညစ်ညမ်းမှုကိုတရားမ ၀ င်လုပ်ပြီးအင်တာနက်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုထုတ်ပစ်မယ်ဆိုပါစို့။ နင့်ကိုငါမုန်းလို့မရဘူးလို့မင်းကိုတမ်းတနေတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုကြည့်ဖို့ငါတို့မိခင်ပရိဘောဂတွေကိုဘယ်နှစ်ယောက်ရောင်းမှာလဲ။
၃ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူသို့မဟုတ်အရက်သမားများသည်ဆေးကုသမှုခံယူရန်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ဆိုင်ရရုံသာမကသူသည်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ သူကအမြဲတမ်းရဲတွေဖြိုဖျက်တာ၊ ဒါမှမဟုတ်ထရပ်ကားကိုဖြိုခွဲတာ၊ ကော်ကို huffing လုပ်တာ၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းသူသည်အင်တာနက်ကိုယ်နှိုက်၏နေရာအနှံ့တွင်သဘာဝကြောင့်သူ၏ရွေးချယ်သောမူးယစ်ဆေးကိုအကန့်အသတ်မရှိထောက်ပံ့ထားသည်။ အင်တာနက် porn သည်ဘယ်တော့မှရောင်း။ မရပါ၊ ဘယ်တော့မှ ID မလိုအပ်ပါ။ (၁၈ နှစ်ပြည့်လျှင်ဟုတ်၊ မဟုတ်ကိုစစ်ဆေးသည်) သင်ကအိမ်မှထွက်သွားရန်ဘယ်တော့မှမလိုအပ်ပါ။ မက်စွဲသူနှင့်မတူဘဲအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူသည်သူ၏အိမ်တွင်နေထိုင်ပြီးသူ၏မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအကန့်အသတ်မရှိအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ပြန်ဖြစ်ရတာလဲ
၄ ။ မသန့်ရှင်းသောလိင်အင်္ဂါများ၏ပုပ်စပ်သောအနံ့သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူတစ် ဦး ၏အခန်းကိုပျံ့နှံ့သွားနိုင်သော်လည်းပုပ်စပ်မှုသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုခြင်း၏ညွှန်ပြချက်မဟုတ်ပါ။ အရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့်စီးကရက်သောက်သူများ၏ပစ္စည်းပင်လျှင်၎င်းတို့ထုတ်ကုန်များနှင့်မတူကွဲပြားသည့်အနံ့ကိုခံနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာမည်သူမဆိုသတိမထားမိဘဲထိခိုက်မှုရရန်အခြားစွဲလမ်းသူများနှင့်အတူလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်တံတားတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုခုအောက်သို့တက်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲသူများသည်သူတို့၏မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအိမ်တွင်သက်သောင့်သက်သာရှိရှိဖြင့်မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျက်စေနိုင်သည်။ သင်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကိုဖုံးကွယ်ရန်အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ရသည်ဟုသင်ခံစားရပေမည်။
ဒါပေမယ့်ကွာခြားချက်ကတော့သင်ပြီးပြီဆိုရင်ပူနွေးလာအောင်လုပ်ဖို့၊ လေသန့်ရှင်းဖို့လေကိုဖျန်းဖို့ဒါမှမဟုတ်ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုအဝတ်လျှော်ဖို့မလိုပါဘူး။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းမှရုန်းထွက်နိုင်သည့်ရနံ့မရှိသေးပါ ငါတို့၏ဇနီးများ၊ မိန်းကလေးများသည်အိပ်ရာပေါ်၌အိပ်လျက်အိပ်နေစဉ်အိပ်ရာထဲလဲနေသောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများပေါ်၌အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမှတဆင့်မည်သူမျှစက်ဘီးစီးခဲ့ကြသနည်း။ ၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်သေစာသောက်စားသူသည်ဘယ်တော့မျှရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။
5. မဇီဝကမ္မဗေဒသဲလွန်စမရှိပါ။ ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါခံစားနေရသောသင်တို့ထဲမှအချို့သည်သူ၏ ဦး ခေါင်းနှင့်အော်ဟစ်သံကိုကြားရတော့မည်ဖြစ်သည်။ "ဒီအချက်မှာဒါပေမယ့်ငါ့ကိုထွက်နားထောင်ကြလော့။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်နှင့်မတူဘဲသင်၏သွေးသို့မဟုတ်ဆီး၌အပြာကိုမတွေ့ရှိနိုင်ပါ။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်သေစာအလွဲသုံးစားလုပ်သူသည်သူ၏အကျင့်ကြောင့်အလုပ်သို့မဟုတ်ကားဆုံးရှုံးသွားမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူသည်သူအလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း၎င်းကိုအမှန်တကယ်ဖမ်းမိသည်မဟုတ်လျှင်၎င်းကိုမည်သည့်အခါကမျှစိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်မှားယွင်းစွာမောင်းနှင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ယာဉ်မောင်းသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်လက်မောင်းသည်သူခရီးသည်ကိုတိုက်ခိုက်နေခြင်းသို့မဟုတ်ကားမောင်းနေစဉ်စာပို့ရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ရဲကသူ့ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးစမ်းကြည့်ပါ၊ သူရပ်လိုက်တဲ့တရား ၀ င်ကန့်သတ်ချက် BAC ရှိတာကိုကြည့်ပါ ဦး ။ သင်သည် porn မှသွေးဆောင်သော ED ရောဂါခံစားနေရနိုင်သည်။ သို့သော်သူသည်ပြန်လာမည့်နေရာတွင်သင်၏ဆရာဝန်ကမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုပြောပြပြီး“ သားကမင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲ၌ညစ်ညမ်းမှုရှိသည်ဟုထင်ရသည်။ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်၍ ညစ်ညမ်းမှုကိုသင်၏ဆီးထဲတွင်သို့မဟုတ်သင်၏အသက်ရှူတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါကသင်၏ဘဝမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
၆ ။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲသူများကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ သို့သော်အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ်ပျောက်ဆုံးသွားသောသွားများနှင့်နစ်မြုပ်နေသောမျက်လုံးများနှင့်သူသည်သူအားစိတ်စွဲလမ်းသူဟုသင့်အားပြောခဲ့လျှင်သင်အံ့အားသင့်မည်မဟုတ်ချေ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သေစာကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်၎င်း၏သုံးစွဲသူ၏ပုံစံကိုပြောင်းလဲနေသည်ကိုလူသိများသည်။ မြင်းစီးသူရဲများရိုက်နှက်ခဲ့သည့်ပွဲတော်မိဖုရားမည်မျှသည်သူတို့မြင်ခဲ့ပုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သူတို့ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းသည်ကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူမည်မျှတူညီကြသည်ကိုစဉ်းစားပါ။ လူအုပ်ကြီးထဲမှအင်တာနက် porn အသုံးပြုသူကိုတောင်သင်ရွေးနိုင်ပါသလား။ မင်းရဲ့ပုံပန်းသဏ္youာန်ကိုခိုးယူထားခြင်းကမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသူကိုသူ၏အကျင့်ကိုဖျောက်ရန်ကူညီရန်နောက်ထပ်ကာကွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
၇။ စားသုံးခြင်းကြောင့်သေခြင်းကြောက်ခြင်း။ မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အရက်စွဲသူများနှင့်မတူဘဲ၊ သင်သည်အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသင့်နှလုံးသားထဲသို့ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သည်။ ငါဆိုလိုတာကရေများများစားစားစားတဲ့သူဟာတစ်နေ့လုံးအရက်မူးနေတဲ့ညစ်ညမ်းဆေးစွဲတာထက်သေတာထက်ပိုမြန်သွားလိမ့်မယ်။ သေခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သုံးစွဲသူအားညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူဘယ်တော့မှမရှိတော့သည့်အကျင့်ကိုဖျောက်ရန်အကောင်းဆုံးလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ အချို့သူတို့သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်းသို့မဟုတ်အချို့ကားများသည်ကားမောင်းနေစဉ်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုခြင်းမှကားတိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသော်လည်းအမှန်မှာထိုအရာများသည်သေခြင်းတရား၏အကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ“ Johnny အကြောင်းဒီမှာမင်းလုပ်ခဲ့တာလား၊ သူသည်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်နို့စို့အရွယ်မိန်းကလေးများစွာကိုကြည့်ရှုခြင်းမှကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအရှက်ကွဲခြင်း "။
8 ။ NO ONE သင်၏မြင့်သိတယ်။ ၎င်း၏သင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းထံမှရ dopamine အလုအယက် meth သို့မဟုတ်ကင်းအသုံးပြုမှုကိုမှနှိုင်းယှဉ်ကြောင်းဆိုပါတယ်ခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့် meth သို့မဟုတ် Coke စှဲလမျးသူသူသိသာသည်သူ၏မူးယစ်ဆေးသုံးပြီးထံမှ buzzed အခါအချိန်ကာလတစ်ခုအထိရှိနေပါတယ်။ ဘယ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူနီးပါးသို့မဟုတ်အဖြစ်မြင့်မားတဲ့ရဆဲတစ်ဦး forklift မောင်းတစ်ဦးလူတန်းစားသင်ပေး, ဒါမှမဟုတ်လိုက်တယ်ရူပရတဲ့မရှိဘဲပုံမှန်စကားပြောဆိုမှုရှိနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ သေချာတာပေါ့သငျသညျစိတျဓာတျသို့မဟုတ်သုန်မှုန်ရစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့အဲဒီအရာမဆိုအရေအတွက်စွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအရက်မူးသောသူသည်မိမိမူးကြောင့်အလုံအလောက်အိပ်ပျော်ခြင်းရတဲ့မ, ဒါမှမဟုတ်သူကသော်လည်းဝမ်းနည်းတစ်ခုခုအကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်တောင်းဆိုဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ငါရတယ်အားလုံးပါပဲ။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့၏နိဂုံးကားအဘယ်သို့နည်း။ သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရမ်းခက်ခဲတာကိုရပ်လိုက်ပါ။ သင်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်ကဲ့သို့သောရေထဲမျောပါသွားခြင်းကိုတားဆီးရန်မည်သည့်အကာအကွယ်မှမရှိသောစွဲလမ်းမှုနှင့်သင်ဆက်ဆံနေရသည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲနေသူကိုဘယ်လိုမူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုသင်အားရနိုင်ပေမယ့်သူဟာသူလုပ်ခဲ့တာထက်ပိုပြီးဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတာသတိရပါ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲသူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသဘာဝအကာအကွယ်များကိုအလိုအလျောက်အကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်သည်။ ပြီးတော့တောင်မှဒါနဲ့အတူတူမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေပါ၊ ကြိုးစားနေပါ။
John Mayer ရဲ့ကိုးကားချက်ကငါဘာကြောင့်ကျန်းမာတဲ့ဆက်ဆံရေးမရှိဘူးဆိုတာကိုနားလည်စေတယ်။ “ …ကျိန်ဆိုမှု ၁၀၀ ထဲကမင်းကပြီးသွားမှာပါ၊ (ကိုးကားချက်အပြည့်အစုံ)
ဒီအကြောင်းကိုဖတ်တဲ့အခါငါတွေးမိတယ်…အိုဘုရားသခင်၊ ဒါငါလုပ်ပေးလိုက်တာပဲ၊ ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာဘာကြောင့်ဒီလောက်တင်းမာနေတာလဲ၊ ငါဟာကျန်းမာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုရှာမတွေ့နိုင်ဘူး။ ငါအပတ်တိုင်းအဝတ်အချည်းစည်း (နှင့်များသောအားဖြင့်အလွန်ဆွဲဆောင်မှု) အမျိုးသမီးထောင်ပေါင်းများစွာ၏မြင်နေငါဒါကြောင့်ငါငါ့ဘားကိုလက်တွေ့မမြင့်မားသောသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်ထင်! ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့် (ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒနယ်ပယ်တွင်) မည်သူယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်အဝတ်အစားများရှိသောအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်နည်း။
ဤသည် Mayer ကနေအလွန်ကြီးစွာသောကိုးကားသည်။ ငါကျိန်းသေကြောင်းဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်ရှာဖွေနိုင်သည့်အပူအရှိဆုံးမိန်းကလေးနှင့်သင်မည်မျှလျင်မြန်စွာပျင်းမည်နည်း၊ အလွန်ပူပြင်းသည့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုသာရှာရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ကြောက်စရာဖြစ်သည်။ ငါဘ ၀ ၏ရက်သတ္တပတ်များသို့မဟုတ်လပေါင်းများစွာဖြုန်းတီးခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါအလုပ်နောက်ကျခဲ့ပြီ၊ ရက်စွဲတွေနောက်ကျခဲ့တယ်၊ လူတွေကငါ့ကိုရေတွက်နေချိန်နောက်ကျသွားတယ်။ ငါကပိုပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးအနည်းငယ်ကိုတွေ့ချင်လို့ပဲ။
တကယ်မှန်ပါတယ်။ ငါ fap ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာတကယ့်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ ရုတ်တရက်တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီလောက်ကုန်သွားပြီ။
ငါသာကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အမပြောတတ်နိုင်ပေမယ်သာ 18 ရက်ပေါင်းဒီစိန်ခေါ်မှုသို့နှင့်အတူငါသည်သင်တို့ပြုလုပ်ကြကုန်အံ့လျှင် PMO နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မယ်နိုငျသောအမှန်စင်စစ်များအတွက်ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် sexy ဇနီးရှိသည်ဖို့ကံကောင်းဖြစ်ကြောင်းကို, ပင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားနှစ်ယောက်ကလေးတွေဆယ်နှစ်ကျော်အကြာတွင်သူမထိုနေ့ sexy ခန္ဓာကိုယ်, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, ချွန်ထက်စိတ်ကို, ငါကပထမဦးစွာကျော်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းသွားကြောင်းတက်ကြွစိတ်ဝိညာဉ်အားထားရှိမည်သိရသည်။
သို့သော် PMO ၏ MY အလွဲသုံးစားမှု ME ပြဿနာကိုဖြစ်စေစတင်ခဲ့သည်! ငါပျင်းရိ, ပုံသဏ္ဍာန်ထဲက kranky ဖြစ်လာနှင့်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပိုပြီးအကြောင်းအရာ PMO နှင့်အတူပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးတည်းအချိန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူအားထုတ်မှုနဲ့သူမနှင့် MY မိသားစုကွက်တိထိုက်သောအာရုံကိုအတွက်တင်ထားတဲ့အတွက်ထက်ပါပြီ။
ကံကောင်းတာက၊ ငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပျက်စီးမှုသိပ်မပေးခင် MY ပြproblemနာရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုရှာတွေ့ပြီ။ အခုငါအဲဒါကိုပြင်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်ဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကနေရှာပြီးမြို့ထဲကနေငါရှာတွေ့ပြီးရင်ခုန်စရာ B&B ကိုသွားမှာပါ။
TL; DR; ငါ MY shit များအတွက်တာဝန်ယူပြီးစေ့စေ့က fix ဖို့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေငါစတင်ခဲ့ပြီတကား
သင်ရုံ, အစ်ကိုငါ့ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အစစ်အမှန်ယောက်ျားကသူတို့ရဲ့ပြဿနာကသူတို့ရဲ့စိတျအပိုငျးအဘို့တာဝန်ယူပြီးအဲဒီအကြောင်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့လူကိုဖြစ်ခြင်း: ဒီမျှ FAP doubters စကားကိုနားထောငျဖို့လိုအပျအရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Awesome ကို post ကို။
Reward circuit resensitization သည်လိင်မလိုအပ်ပါ။
(ငါ့အ english! = ဇာတိ)
ငါဒီအတွေ့အကြုံကိုတင်ချင်တယ်။ ငါတစ်နှစ် 1/3 ကဲ့သို့ nofap ဖြစ်ရပြီ (ထပ်ခါထပ်ခါမဟုတ်နှင့်လျှင်ယေဘုယျအားဖြင့်ပျော့လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူ) ပြီးရင်ရက်အနည်းငယ်က ted (x) ကနေ nofap ကိုတွေ့တယ်။
ကျွန်ုပ်၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုဆွေးနွေးရန်ထပ်မံထည့်သွင်းလိုသည်မှာဆုချီးမြှင့်သော circuit (RC) သည် fap ကြောင့်လည်းအထင်မကြီးကြောင်းသတိပြုမိသည်။ လိင်မှုနှိုးဆွမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောလှုံ့ဆော်မှုများ၊ သို့သော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်တစ် ဦး တည်း (PMO ဖြစ်ပါကပိုမိုအားကောင်းလာလျှင်) (မကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ခဲ့လျှင်) imho သည်ဆုလာဘ် circuit ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး desensitization လိုပဲ။ အစစ်အမှန်ဘဝမှဥပမာ - စန္ဒရားတေးဂီတကိုနားထောင်ခြင်း၊ မက်မွန်သီးစားခြင်း၊ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသောက်ခြင်းစသည့်သာမန်အရာများ - ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုအမြဲတမ်းချစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါသတိထားမိ, ပြီးခဲ့သည့်လအနည်းငယ်အတွင်းတစ်နည်းနည်းနဲ့တယ် ပိုပြီးပြင်းထန်.
ဒီနေ့ငါတို့ဥယျာဉ်မှမက်မွန်သီးကိုစားပြီးအစာစားခြင်းသည် 'အော်ဂဇင်စ်' (သိပ်မပြင်းထန်ဘူး) သို့သော်ကြာရှည်ခံသည်။ ၎င်းသည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းရုံသာမကအော်ဂဇင်ပြုသည့်အရာကိုလည်းပေးသည်။ ဒါမှမဟုတ်ညနေခင်းနှောင်းပိုင်းမှာတိတ်ဆိတ်စွာနေခြင်း - အဲဒီအရာတွေကိုငါအမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ခဲ့တယ်၊
TL; DR ဒီ Imho တကယ်ချွတ်ချေကြောင်း nofap အဘို့အမြိုးသမီးတ / ED / ဘာသာတရားကိုတွေ့ဆုံထက်အခြားအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။